Nezvedu - Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd.
Nei Huayuemei Kuvhenekesa
Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co, Ltd yakavambwa muna 2006. Huayuemei Mwenje seProfessional LED Mwenje Strip mugadziri, Nyanzvi mukugadzira, kugadzira uye kugovera anopfuura makore gumi. Iine 2,300 sqm yezvivakwa zvekugadzira muGuangzhou, China.
Isu tine mukana wakakura mukugadzira uye ruzivo rwekugadzira, musangano, zvigadziriso, timu yekutengesa.
Nheyo: Hwakanaka mhando uye yemakwikwi mutengo, hukuru kukosha kwevatengi.
Chigadzirwa chigadzirwa chakanakisa chinonyanya kushanda, chinokwezva, uye chakakosha chigadzirwa (LED Strip Mwenje).
Isuwo tinogamuchira OEM odha dzevatengi dzakakosha zvido. Ticharamba tichigara tichigadzira chigadzirwa chitsva, kusimudzira chigadzirwa chedu uye nekuvandudza masevhisi edu.
Isu tine timu yakasimba yekuita yako odha munguva inoshanda, kuendesa mutengi munguva. Isu zvakare tine yakasimba kwazvo yekugadzira chiyero, ita shuwa kuti chigadzirwa chose chakagadzirwa mushe mushe musanganiswa yekubatanidza cheni yekugadzira.
Huayuemei inyanzvi yekutengesa LED Strip Mwenje kunyanya inosanganisira Backlight LED Strip Mwenje, Edge-yakavhenekerwa LED Module Bar, Flexible / Rigid LED Strip Mwenje, Backlight LED Module, isu tanga tichishanda kuUS Lighting muChina kweanopfuura makore gumi. Isu zvakare tine sarudzo dzakasarudzika kubatsira vatengi kuti vagadzirise cheni yavo yekupa kune dzakasiyana nzira.
Yedu yekutengesa timu inovavarira kugutsa vatengi nemabasa akanaka kwazvo. Zvakare, zvichibva pahukama hwedu hwepedyo nevatengi, isu tinogara tichigona kuwana ruoko rwekutanga ruzivo kubva kumusika uye rinogona kuverengerwa maererano nechikumbiro chakakosha chevatengi. Kupfuura makore gumi- kukura, isu tine ruzivo muODM pamwe neOEM. Tiine yedu yekutanga chigadzirwa uye sevhisi, isu tasimbisa bhizinesi rekudyidzana rakanaka nevatengi mumisika yekumba neyekunze kwenyika vanogamuchirwa. Kana iwe uchifarira chero chezvinhu zvedu kana uchida chero rumwe ruzivo, pls usazeze kutibata nesu. Tiri kutarisira kushandira pamwe newe munguva pfupi iri kutevera.
Hunhu & Certification
Isu tinogadzira in-imba kuti tipe hunhu hwemhando yepamusoro. Yedu LED Strip mwenje ndeye CE, Rosh uye UL yakasimbiswa.
Zviri nyore ndiyo mantra yedu. Mhinduro dzedu dziri nyore kuisa, zviri nyore kuburitsa uye nyore kubata. Uye isu tichaenderana nechikumbiro chako kuti tiite mhinduro yakanakira iwe.
Huayuemei Mwenje indasitiri inogadzira indasitiri & kambani yekutengesa kune zvese zvaunoda. Okugadzira zvinhu kunotyaira uye kunotikurudzira.
Yedu iri-mukati R & D timu inotsvaga maitiro matsva uye inogadzira zvigadzirwa zvitsva zveiyo chikamu.
Isu tiri nyanzvi mukuburitsa kukuru nekuda kwedu 2,300 sqm yezvivakwa zvekugadzira muGuangzhou, China.
Tichapa mhando yepamusoro uye yakanakisa yekutengesa-masevhisi.
Tiine makore anodarika gumi nemana ekuziva, isu tine vatengi munyika dzinopfuura zana nemakumi matatu nemakumi mana emaguta.